NA-AGBANWE IHE OYIYI NA FOTO - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Ruo ugbu a, netwọk ahụ nwere ike ịchọta ọtụtụ narị puku eserese na foto dị iche iche. A na-ekesa ha niile n'ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ha, mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ka ị gbanwee usoro ha: iji belata nha, dịka ọmụmaatụ.
Ya mere, n'isiokwu taa, anyị ga-emetụ ọ bụghị naanị mgbagwoju anya oyiyi, mana anyị ga-elekwasị anya na usoro ndị a na-ewu ewu, mgbe na nke ka mma iji ...
1. Usoro ihe omume kachasị mma maka ịtụgharị na ịlele
2. Ụdị nke ọma: uru ha na uru ha
3. Ịtụgharị otu foto
4. Nchighari batch (ọtụtụ ihe oyiyi n'otu oge)
Onye na-ekiri ihe nkiri. Na-akwado ihe dịka ụzọ dị iche iche 500 (ma ọ dịkarịa ala, ikpe ikpe site na nkọwa nke ndị mmepe)!
Onwe m, m ezutebeghị ụdị usoro ndị a na usoro a enweghị ike imeghe.
Ihe ọ bụla ọzọ, n'ọgụ ya, enwere ọtụtụ nhọrọ, nke ga-aba nnọọ uru:
- ichighari ihe oyiyi, tinyere nchighari nke batch;
- mepụta faịlụ pdf (lee ebe a);
- Chọọnụ foto yiri (ị nwere ike ịchekwa ọtụtụ ohere). Site n'ụzọ, enwererịrị otu isiokwu gbasara ọchụchọ maka faịlụ ndị ahụ;
- mepee screenshots, wdg.
A na-atụ aro ka ị mara ndị niile na-arụ ọrụ na ihe oyiyi.
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị faịlụ. N'ebe a, m ga-achọ ịkọwa ihe kachasị mkpa, ndị na-eme ka ihe ka ukwuu n'ime foto ndị dị na netwọk.
Bmp - otu n'ime usoro kachasị ama maka ịchekwa na ịhazi ihe oyiyi. Foto ndị dị na usoro a na-eburu ọtụtụ ohere na diski ike, maka iji tụnyere, ugboro 10 karịa na usoro JPG. Mana ha nwere ike itinye aka na ha ma belata nha ha, dịka ọmụmaatụ, maka ịnyefe faịlụ n'elu Intaneti.
Ụdị a dabara adaba maka ihe oyiyi ị na-eme atụmatụ idezi dịka nsonaazụ. ọ dịghị mpịakọta foto na àgwà ya adịghị ibelata.
Ganye - usoro kachasị maka foto! Na usoro a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ narị puku foto na Intaneti: site n'onye kasị nta na ọtụtụ megabytes. Ihe dị mkpa nke usoro: n'ụzọ zuru oke na-eme ka onyinyo ahụ dị mma.
A na-atụ aro ka ị jiri foto mee ka ị ghara idezi n'ọdịnihu.
GIF, PNG - Achọpụtala ọtụtụ ugboro na weebụsaịtị dị iche iche na Intanet. Ekele ya, ị nwere ike iwepụta ihe oyiyi ahụ ọtụtụ ugboro, àgwà ya ga-abụkwa ọkwa dị mma.
Na mgbakwunye, n'adịghị ka JPG, usoro a na-enye gị ohere ịhapụ ntụgharị ihu-azụ! Onwe m, m na-eji usoro ndị a kpọmkwem maka omume ọma a.
N'okwu a, ihe niile dị mfe. Tụlee ihe ndị ahụ.
1) Kwalite usoro XnView ma mepee ihe oyiyi ọ bụla ịchọrọ ịchekwa na usoro dị iche.
2) Ọzọ, pịa bọtịnụ "zọpụta dị ka".
Site n'ụzọ, ṅaa ntị na akara ala: a na-egosipụta usoro nchịkọta, nchịkọta ya, ole ohere ọ na-ewe.
3) Ihe omume a ga - enye gị 2-3 ụdị dị iche iche: BMP, JPG, TIF, ICO, PDF, wdg. N'ihe nlereanya m, họrọ BMP. Mgbe ịhọrọ usoro ahụ, pịa bọtịnụ "zọpụta".
4) Onye obula Site n'ụzọ, na ala nke onyinyo ị nwere ike ịhụ na ịchekwa ihe oyiyi ahụ na BMP - ọ malitere ịwekwu ohere: site na 45 KB (na mbụ JPG) ọ ghọrọ 1.1 MB (nke bụ ~ 1100KB). N'ihe dị ka ugboro 20, ntinye faịlụ abawanyela!
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta ihe oyiyi ahụ nke ọma ka ha weghara obere ohere, họrọ usoro JPG!
1) Mepee XnView, họrọ ihe oyiyi anyị ma pịa "ngwaọrụ / nhazi usoro" (ma ọ bụ mkpọchi bọtịnụ Cnrl + U).
2) A windo na ntọala maka nhazi faịlụ ga-apụta. Kwesịrị ịtọ:
- nchekwa - ebe ebe nchekwa a ga - azoputa;
- usoro iji chekwaa faịlụ ọhụrụ;
- gaa na ntọala mgbanwe (taabụ n'akụkụ isi, hụ nseta ihuenyo n'okpuru ebe a) ma debe nhọrọ maka nhazi oyiyi.
3) Na taabụ "mgbanwe" enwere ezigbo narị ọnụọgụ abụọ na-akpali akpali nke na-enye gị ohere ime ihe niile i nwere ike iche n'echiche na foto!
A bit nke ndepụta nyere site na usoro XnView:
- ike iji mee ka onyinyo ahụ, oji na oji, chọpụta ụfọdụ agba;
- belata akụkụ ụfọdụ nke foto niile;
- debe ihe omimi n'elu ihe osise nile (di nkpa ma oburu na iga na ebiga foto na netwọk);
- gbanwee foto na ntụziaka dị iche iche: tụgharịa na ihuenyo, horizontally, gbanwee 90 degrees, wdg.;
- megharia ihe oyiyi, wdg.
4) Nzọụkwụ ikpeazụ - bọtịnụ pịa arụ ọrụ. Usoro ihe omume ahụ ga-egosi na oge mmechi ọrụ gị.
Site n'ụzọ, ị nwere ike inwe mmasị na otu isiokwu banyere ịmepụta PDF faịlụ site na foto.
N'isiokwu a, anyị na-ele anya ọtụtụ ụzọ iji tọghata foto na foto. A na-emetakwa usoro ndị na-ewu ewu maka nchekwa faịlụ: JPG, BMP, GIF. Iji chịkọta, isi ihe dị na isiokwu ahụ.
1. Otu n'ime usoro kachasị mma maka iji foto - XnView.
2. Iji chekwaa ihe oyiyi ị na-eme atụmatụ idezi - jiri usoro BMP.
3. Maka kachasị mkpado foto, jiri usoro JPG ma ọ bụ GIF.
4. Mgbe ị na-agbanwe ihe oyiyi, gbalịa ka ị ghara ijikọ kọmputa ahụ na ọrụ dị egwu (egwuregwu, ikiri HD video).
Site n'ụzọ, olee otu ị si emegharị foto? Na ụdị usoro ị na-echekwa ha na draịvụ ike gị?